Niobium silicide iskudhafka iskudhafka iskudhafka ah ee isku-dhafan ee loo yaqaan 'Niobium silicide' waa qalab dhismeed heerkulkiisu sarreeyo. Isku-dhafkan labada waji ah, xalka niobium wuxuu bixiyaa adkaanta heerkulka qolka halka si2nb ay bixiso awood heer-kulkeedu sarreeyo. Isku dhafka ayaa leh xasilooni heer sare ah oo heer sare ah iyo xasiloonida microstructural ee heerkulka sare.
Magaca Shiinaha: niobium silicide
Magaca Shiinaha: Niobium disilicide / Niobium disaliticide
Ingiriis loo yaqaan: niobium silicide (NbSi2); niobium silicide; naafonimada niobium
Qaaciddada Molecular: NbSi2
Miisaanka muruqyada: 149.0774
Tafatirka astaamaha kiimikada jirka
Barta dhalaalida: 1940 ℃
1. Niobium silicis isku-darka iskudhafka isku-dhafan ee isku-dhafan ee loo yaqaan 'Niobium silicide' waa qalab dhismeed heerkulkiisu sarreeyo. Isku-dhafkan labada waji ah, xalka niobium wuxuu bixiyaa adkaanta heerkulka qolka halka si2nb ay bixiso awood heer-kulkeedu sarreeyo. Isku-dhafka ayaa leh xasillooni heer sare ah oo heer sare ah iyo xasilloonida microstructural heerkulka sare.
2. NbSi2 ku saleysan superalloy wuxuu leeyahay barta dhalaalida sare, cufnaan hoose iyo sifooyin heer sare ah oo dhameystiran. Heerkulka adeegga bartilmaameedkiisu waa 200-300 ℃ oo ka sarreeya kan ku saleysan superalloy ee Ni. Waxaa lafilayaa in loo isticmaalo makiinadaha matoorrada gaasaska gaaska ee ka shaqeeya 1300-1500 ℃ iyo qeybaha dhamaadka kulul ee aerospace motor scramjet engine.
3. Fikradda cilmi baarista iyo horumarka ee NbSi2 ku saleysan superalloy waa in la sameeyo niobium based solid solution / Nb5Si3 dual phase composite iyadoo lagu darayo wajiga xalka adag ee ductile, kaas oo hagaajin kara adkaanta heerkulka qolka iyada oo la ilaalinayo awoodda heerkulka sare ee aadka u fiican.
Hore: Xafnium Silicide, HfSi2
Xiga: Molybdenum Silicide, MoSi2
Niobium Silicide daawaha Warshadaha
Niobium Silicide daawaha Factory
Niobium Silicide daawaha soo saaraha
Warshadaha budada dila ee Niobium
Warshad budada siliko Niobium
Soosaarayaasha budada siliga Niobium
Niobium budada siliciska Qiimaha
Xigashooyinka budada siliga Niobium